Yeinyore 3 maminetsi gwara kunzwisisa blockchain uye cryptocurrencies | Crypto Gator | Iyo Yakanakisa Cryptocurrency, Blockchain uye Forex Nhau Aggregator
Yeinyore 3 maminetsi gwara kunzwisisa blockchain uye cryptocurrencies
Zviwanikwa uye maGuides
Cryptocurrencies imhando yedhijitari yemari, zvichireva kuti idhijitari chaiyo - hapana mari yemuviri kana bhiri inoburitswa. Ivo svikiro rekutsinhana kwezvinhu uye masevhisi. Seye peer-kune-peer mari sisitimu, cryptocurrencies haidi vamiririri vasati vagone kuendeswa pakati pevanhu.
Iyo Cryptocurrency Musika
Mari yeDhijitari Wallets
Inobatsira Sei Crypto Investment?
Chinyorwa chinyorwa: SoFi.com
Cryptocurrencies imhando yedhijitari yemari, zvichireva kuti idhijitari chete - hapana mari yemuviri kana bhiri inoburitswa. Ivo svikiro rekutsinhana kwezvinhu uye masevhisi. Se peer-kune-peer mari system, cryptocurrencies havade vamiririri vasati vagone kuendeswa pakati pevanhu.
Bitcoin, yekutanga uye yakakura kwazvo mari yemadhora nemusika capitalization yakavambwa mukumuka kwedambudziko remari ra2008. Iyo yakanakisa crypto asset yakagadzirwa nemunhu asingazivikanwe kana boka revanhu vari pasi pezita rekunyepedzera Satoshi Nakamoto.
Kune akatiwandei madhijitari emari kunze uko, aine akawanda achigadzirwa zuva rega rega, zvisinei Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) uye Tether USD (USDT) ndiwo epamusoro matatu madhijitari makuru aripo. Kubva zvawakauya kuzobudikira pachena, crypto pfuma vanga vachiwana yakawanda yekufarira - kukwezva vese vatengesi nevatambi vemasisitimu.
Nhasi, vatengesi vazhinji uye masuo ekubhadhara anotambira kubhadharwa kwekrispto - kufambisa zvirinyore uye zviri nyore kubhadhara zvinhu uye masevhisi. Kunyangwe nyika zhinji dzisina kumhara zvinyoro crypto, blockchain, iyo tekinoroji yepasi yemari yemadhora yakawana kugamuchirwa kwekuwedzera pamarudzi ose.
Cryptocurrencies inochengetedzwa nekrisptographic ledger technology inonzi blockchain izvo zvinoita kuti zvive zvinokanganisa-chiratidzo uye zvisingachinjiki. Bitcoin inogadzirisa rimwe rematambudziko makuru ane chekuita nemari yedhijitari - dambudziko rekushandisa zvakapetwa kaviri. Kupesana neyechinyakare yemari system, madhijitari haana kupihwa nechero muviri wepakati, nekudaro iwo wakasununguka kubva pakati pekutonga nekunyepedzera.
Pakupedzisira, zvinopesana nekudzvinyirira uye hazvigone kuvharwa nekuti zvinonyanya kupihwa masimba.
Cryptocurrencies iri kutengeswa kungave munzvimbo dzepakati kana dzekudyidzana. Crypto kuchinjana parizvino ndivo vanopa rubatsiro rwekutsinhana pamari yedhijimendi nepo nzvimbo dzekuchinjana dzichiverengera chikamu chakakura chehuwandu hwehuwandu hwehuwandu hwemakristcheni anotengeswa mukuchinjana.
Pakati pekutsinhana (CEX) inoshanda zvakangofanana neyechinyakare musika wemari ine imwechete poindi yekutonga. Sechinonyanya kuwanikwa uye chiri nyore kushandisa kuchinjanisa, kuchinjana kwepakati pane imwe nharo sezvo cryptocurrencies inoonekwa seyakagadzwa nekokorodzano.
Pfungwa ye centralization inoreva kuti wechitatu-bato kana wepakati-murume anoshandirwa mukuitisa kwekushandura cryptocurrencies. Vatengesi kana vashandisi vanoisa mari yavo mukutarisirwa kwepakati-murume sezvavanopinda mukuita kwezuva nezuva. Mukutsinhana kwepakati, mirairo inoitwa off-chain.
Kugadziriswa kwakatemerwa (DEXs) mukusiyana zvakanangana zvakanangana nevamwe vavo vepakati. Shanduko muDEX inoitwa on-chain (ine smart contract), mune mamwe mazwi vashandisi kana vatengesi havavimbi mari yavo mumaoko emunhu wepakati-murume kana wechitatu-bato. Ose odha (mashandisiro) anoburitswa pane blockchain - iri nzira isinganzwisisike yekutengesa kwe cryptocurrency.
Mhedzisiro chete yekushandurana munzvimbo dzakasarudzika ndeyekuti zvinogona kuve zvakati omei kune veNewbies vanogona kunge vaine nguva yakaoma yekufamba mukutsinhana. Nekudaro, chizvarwa chitsva DEX senge Uniswap, Sushiwap yakawedzera kurerutsa maitiro aya.
Ivo vanoendesa Automated Market Makers (AMM) kutsiva pfungwa yeOrodha Mabhuku. Mune iyo AMM modhi pfungwa, hapana vagadziri kana vanotora, Vashandisi chete vanoita mabasa. Sezvatotaurwa, AMM-based DEXs inoshandisa-nyore. Ivo anoshandiswa zviri nyore uye anonyanya kusanganisirwa muzvikwama zvakaita se Trust Trust Wallet, MetaMask uye ImToken.
Mazhinji macryptocurrencies akaita seBitcoin anocherwa. kuchera inzira inoitwa neyekutsvagisa mari yemadhora matsva uye matombo matsva akawedzerwa ku blockchain. Miners vanogashira kukurudzira kwekusimbisa kutengeserana kana kuwedzera matsva mablockchain. Aya ndiwo makwikwi maitiro, mukana wekuchera block unonyanya kutarisana ne hashing simba yekomputa yemugodhi.
Yeye Bitcoin network, iyo block mubayiro parizvino 6.25 bitcoins. Kune rimwe nerimwe bhuru rakacherwa, mucheri akawedzera bhuroka achagamuchira 6.25 bitcoins. Iyo mibairo inoenderera ichipera hafu yega yega makore mana muchiitiko chikuru chinonzi Bitcoin Hafu. Hafu yekupedzisira yakaitika muna Chivabvu 11, 2020, ichideredza mubairo kubva pa12.5 bitcoins kusvika 6.25 bitcoins.
Pamusoro pemubairo wekumigodhi unogashirwa, vacheri vanowanawo kubva pamitero yekutengeserana yakabhadharwa nevashandisi pakutumira, kutengesa mari dzemadhora. Mari dzakadai dzinogona kubva pamasendi mashoma kusvika kumadhora akati wandei.
Iwo emakomputa emakomputa anotora zviitiko kubva padziva rekumirira kutengeserana, wobva wamhanya cheki kuona kuti mushandisi ane mari yakakwana yekupedzisa kutengeserana uye cheki chechipiri kuve nechokwadi chekuti mutengidziro wakabvumidzwa nenzira kwayo.
Muchiitiko chekuti mushandisi akadaro asina mari inokwana kubhadhara mari yekutenga, iko kutengeserana kungangodzokera kumashure kune vashandisi sekutadza kutengeserana. Vashandi vemumigodhi vane mikana yekutora mashandisirwo nemari hombe yekutengesa. Ichi ndicho chikonzero zvinowanzoonekwa sezvizvi 'iyo yakakura iyo fizi, iyo inokurumidza kuita kwekuitisa'.
Vashandisi veCryptocurrency vane sarudzo yekusarudza pakati pepamhepo, isingaite kana Hardware zvikwama. Zvichienderana nesarudzo yaunogadzirisa chikwama chine zvinhu zvakachengetedzeka zvakakwana. Kunyangwe zvikwangwani zvepamhepo uye zvepamhepo zvakaratidza kuve zvakachengeteka, zvikwama zvehardware zvinozivikanwa kuti zvinopa chengetedzo yepamusoro yezvinhu zvako zvemadhijitari.
Zvikwereti zvepamhepo zvinowanzo kuve zvemahara, zvinoshandisa mushandisi uye zvinowanika zviri nyore uye nekudaro, ndidzo dzinonyanya kushandiswa zvikwama mu crypto indasitiri. Panguva imwecheteyo, ivo ndivo vanonyanya kutambura pakati pemhando dzakasiyana dze crypto wallets. Pedyo ne Hardware chikwama, chikwama chisina kubatana chinopa chengetedzo irinani zvirinani kune yako crypto zvinhu.
Kana iwe uri kushandisa cryptocurrency chikwama kekutanga nguva, kunamatira kune yakachengeteka asi mushandisi-inoshamwaridza chikwama inofanirwa kuve yako yekutanga nhamba chinangwa. Zvekuchengetedzeka kwepamusoro, Hardware Mahwendefa akadai seiyo Ledger Nano X inokurudzirwa nenyanzvi.
Kutsigira crypto wallets inzira yakakosha mukuchengetedza-kwakachengeteka crypto assets. Kana iwe uchinge warasikirwa nechikwama chemunhu, mari dzinogona kudzoserwa zviri nyore kuchikwama chitsva uchishandisa makiyi epachivande kana mapasipoti akawanikwa kubva kumashure kumusoro.
Cryptocurrencies inoonekwa seyakanyanya kusagadzikana zvinhu, uye nekudaro ivo vari pasi pemitengo mikuru yekuchinja. Mune dzidziso, Kuisa mari pamusoro penjodzi kunoreva mibairo yakakwira, izvi ichokwadiwo nemari yemadhora. Kana paine mukana wekukanganisa, kurasikirwa kwacho kunogona kukuvadza. Ichi ndicho chikonzero nei vanachipangamazano vekudyara vachiparidzira 'Usambofa wakaisa mari yausiri kuda kurasikirwa nayo panguva ipi neipi nenguva.'
Iyo yekumusoro mikana inogona kusingaperi, Bitcoin yanga ichitengesa madhora chiuru kutanga kwaGunyana muna1000 uye nhasi iri kutengesa pamusoro pe $ 2020k. Iine pamusoro pe19 madhijitari kunze uko, zvinoda kuongororwa kwakawanda kuti utore mari yakanaka kana chiratidzo ine yepamusoro yepamusoro mikana. Nekudaro, mikana yekuwana purofiti mumusika wemombe inogara yakakwira kubvira, sezvinozivikanwa aphorism, "Mhepo inosimuka inosimudza zvikepe zvese".
Posted on December 13, 2020 0 By Crypto Gator	Zviwanikwa uye maGuides Posted in Zviwanikwa uye maGuides Tagged #Cryptocurrencies, Bitcoin, Blockchain, Ethereum
Ino inzvimbo yekutora nhau dzichangoburwa nezve cryptocurrencies senge Bitcoin (BTC) uye Ethereum (ETH), uye blockchain tekinoroji zvakajairika, pamwe nekuve nekuwana zviwanikwa uye magwara ekukubatsira kufamba neiyo cryptocurrency uye blockchain ecosystems.
unofanirawo danda riri kuposita mhinduro.
Next Post Chinese vagari vanoita 20K transaction mune yedhijitari yuan kesi yechiitiko
Previous Post 'Bitcoin haimbobviswi' - vatambi vekrispto vanopindura kutyora kweU.S. Treasure